Proclaiming the Word - Czeslaw Bassara | General
"Kana irraa kan hafes, obboloota nana, dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee, isin biratti, akkuma fudhatames, ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa!” 2ffaa Tasal 3:1
Bara 1984 iddo Brzeszcze qaraqara Ooswiyeezim (Awuschinliitu) poolandii keessatti maatii kiritiyaana irra dhalate.
Bara 1965tti gara gooftaa dhufe. Baruma kanatti tajaajilaa daa'imanii poolandii keessatti eegale.
Waa'ee ooswiyeezim qayyabachaa fii hojjechaa hanga bara 1969 ture.
Bara 1969-1974tti lafa barnoota amantaa warsaawu poolandii keessatti barumsaa waa'ee amantaa (Tiwoloojjii) qayabatee bara 1972tti haadha mana isaa Heelena jedhamtuu fuudhe. Ijoollee lama, Boogdaan (bara 1975tti) fii Doorotaa (bara 1979tti) dhalche. Ijoolleen isa lamanuu heerumanii abbaa warraa isaanii (Agniyeeszikaa fi Konraadii) waliin tajaajila CEF keessatti hirmaatanii jiru.
Bara 1975tti barumsaa tiwoloojiittin digrii lamaffaa (mastersii) isaa achuma poolandii keessatti fudhate.
Bara 1976tti barumsaa isaa geggeessummaan Inistiiyuutii leenjii CEF isa kilchazimeerii siwizeerlandiitti xumure.
Bara 1969-1990tti qindeessa wangeela daa'imanii fi dargagootatti labsuu ta'ee akkasummas, barsiistotaa fi maatii leenjisuu itti fufe.
Bara 1982-1990tti waldaa dhaabuun mana barnoota kitaaba qulqulluu fii waldaa warra wangeela keessatti barsiisaa ture. Bara 1991 hanga 2006/2007tti haadha mana isaa heelena waliin CEF keesstti dareekteraa ta'uun Awuuropaa gidduu galeessa fii bahaatii tajaajilaa turan. Keessumattuu karaa addaattin tajaajila CEF Raashiyaa tii fi gidduu galeessa Eeshiyaa irratti xiyeeffannaa addaa laachuuni fii geggeessitoota biyyaa 30 tiif kallatti(karaa) laachuun tajaajila jiru. Akkasumas miseensa kaawuncilii diree (field) warra Awuroopaati.
Bara 2000-2006tt sagantaa dottoreettittin barumsaa isaa faakaltii Evaangelikal tiwoloojjii Heventii /Liiyoveenu beljiyaamitti qayabannaa isa itti fufe.
Bara 2006tti PhD isaa tiwoloojjii malattin(systematic theology'n) argate. Kunis mala ittin dhaloota haaraa barsiisanii fi deebii barsiisa sana of keessa kan qabuudha.
Bara 2008tti sagantaa dubbicha ykn sagalicha labsuu jalqabe kunis tajaajila waliigalaa kitaabaa qulqulluu barsiisuu CEFtii.
Dooktor Czeslaw Bassara afaan Jermaanii, Ingilizii, Raashiyaa, Poolandii fii Esperanto dubbachuu ni danda'a.
Tajaajilli kitaaba qulqulluu barsiisuu kunis ardiiwwan hundummaa keessatti biyyoota 60'n ol akka doo'atus isaa godheera.
Kana irraa kan hafes, obboloota nana dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee, isin biratti akkuma fudhatames, ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa! (2 Tasa 3,1)
Yaaqob N. Ispurgiyoon akkas jedhe barreessee ture:
Hojiin filannoo keetii, tajaajilli waamicha kastosiiti. Hojii keessatti akka ofitti fudhatutu sirra eegama; tajaajila keessatti akka kennittutu sirraa eeguma. Hojii keessatti wanta tokko argachuuf wanta ta'ee kennu qabda; tajaajila keessatti wanta siif kenname deebistee kennu danda'uu qabda. Hojiin dandeetti kee irratti hunda'aa. Tajaajilli dandeetti ati waaqayyoof qabduu irratti hunda'a. Hojii hojeteef galatni akkuma siif laatamu; tajaajilli godhamuu ulfina waaqayyoof kena.